सिद्धलेक गाउँपालिकामा ‘ब्रम्हलुट’ : औषधी खरिदमा नक्कली बिल, अध्यक्ष सिलवाल नै समलग्न ! | Diyopost - ओझेलको खबर सिद्धलेक गाउँपालिकामा ‘ब्रम्हलुट’ : औषधी खरिदमा नक्कली बिल, अध्यक्ष सिलवाल नै समलग्न ! | Diyopost - ओझेलको खबर
दियो पोस्ट सोमबार, साउन १९, २०७७ | १७:०८:५२
धादिङ, १९ साउन । धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाले खरिद गरेको लाखौँको औषधीमा चरम अनियमितता भएको पाइएको छ ।
सिद्धलेक गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनेश्वर पौडेल र स्वास्थ्य प्रमुख राम प्रसाद सिलवालको मिलेमतोमा गाउँपालिकाबाट खरिद गरिएको भन्दै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले निशुल्क दिएको औषधीलाई समेत नक्कली बिलमा चढाएर लाखौँ भुक्तानी लिएको पाइएको छ ।
नेपाल सरकारले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मार्फत जिल्ला अस्पताल, प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी लगायत निकायहरुलाई ७० प्रकारका औषधीहरु निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सिद्धलेक गाउँपालिकाले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट पाएको निशुल्क औषधीलाई समेत ‘खरिद गरेको भन्दै’ नक्कली बील बनाएर गाउँपालिकाका उच्च अधिकारीले लाखौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पाइएको हो । औषधी खरिदको विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियाार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
‘औषधी खरिद, डिपबोरिङ, ट्याक्टर, सोलार खरिद लगायत विषयमा भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ,’ अनुसन्धानमा समलग्न उच्च स्रोतले दियोपोष्टसँग भन्यो,‘गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवालसँग मौखिक बयान लिने कार्य समेत भइसकेको छ ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष सिलवालकै समलग्नतामा औषधी खरिदमा व्यापक घोटाला भएको तथ्य दियोपोष्टले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो ।
गाउँपालिकाले ‘शिलबन्दी बोलपत्र’को नाममा सार्वजनिक सुचना बिनै २०७६ चैत्र ७ गते १९ लाख २० हजार ८ सय ८० रुपैयाँको ठेक्का सञ्जु श्री मेडिसिन सप्लायर्सलाई दिएको थियो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनेश्वर पौडेल, स्वास्थ्य प्रमख राम प्रसाद सिलवाल, प्रशासन प्रमुख हरि पाटा मगर लगायतले शिलवन्दी बोलपत्रको विवरणमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
शिलबन्दी बोपत्रमा आएका प्रस्तावहरुमाथिको टिप्पणीमा अध्यक्ष सिलवालद्वारा गरिएको हस्ताक्षेरित विवरण
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट गाउँपालिकाले पटक पटक औषधी लिएको पाइएको छ । तर, उक्त औषधीको मुल्य र गाउँपालिकाले खरिद गरेको औषधीको मुल्यमा भने गुणात्मक फरक रहेको पाइएको छ ।
दियोपोस्टलाई प्राप्त सञ्जु श्री सप्लायर्सको ‘नक्कली बील’ अनुसार गाउँपालिकाले ५०० एमजीको एमोक्सीसिलिन क्याप्सुल २० हजार ट्याब्लेट्वको मुल्य एक लाख ३६ हजार रुपैयाँ तिरेको उल्लेख छ । गाउँपालिकाले प्रति ट्याबलेट्स ६ रुपैयाँ ८० पैसा तिरेको भनिएको छ । तर, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले पनि गाउँपालिकालाई ५ हजार एमोक्सीसिलिन नामकै औषधी निशुल्क दिएको छ ।
५ हजार औषधी दिएको जनस्वास्थ्यले प्रतिट्याबलेट्स २ रुपैयाँ ८९ पैसामा खरिद गरेको देखिएको छ । गाउँपालिकाले सोही औषधी खरिद गर्दा प्रतिट्याबलेट्स चार रुपैयाँ एक पैसा महँगो तिरेको छ । जबकी २० हजार ट्याबलेट किन्दा ८० हजार २ सय रुपैयाँ एउटै औषधीमा घोटाला भएको देखिएको छ ।
त्यस्तै गरी टाइफाइडको ५०० एमजीको सिप्रोफ्लोक्सासिन औषधी गाउँपालिकाले १० हजार ट्याब्लेट्स किनेको देखाएको छ । नेपाल सरकारले निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने यो औषधी गाउँपालिकाले ६७ हजार रुपैयाँमा किनेको देखाएको छ । बिल अनुसार प्रति ट्याबलेट्स ६ रुपैयाँ ७० पैसाका दरले गाउँपालिकाले किनेको देखिन्छ ।
तर, सोही औषधी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले पनि गाउँपालिकालाई निशुल्क दिएको स्वास्थ्य कार्यालयको हस्तान्तरण फारममा देख्न सकिन्छ । जनस्वास्थ्य कार्यालयले ३ हजार ट्याबलेट्स किन्दा प्रति ट्याबलेट एक रुपैयाँ २८ पैसामा किनेको छ ।
सोही ट्याबलेटमा समेत गाउँपालिकाले प्रति ट्याबलेट ५ रुपैयाँ ४२ पैसा घोटाला गरेको देखिन्छ । १० हजार सिप्रोफ्लोक्सासिन ट्याबलेट खरिद गर्दा ५४ हजार २ सय रुपैयाँ सोझै घोटाला भएको देखिन्छ ।
१० एमजीको एट्रोभास्टाटिनले प्रेसर नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । यस्ता ६ हजार ट्याबलेट गाउँपालिकाले खरिद गरेको देखाएको छ । प्रति ट्याबलेट ८ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले कुल ५१ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको देखाएको छ । तर, सोही औषधी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले पनि गाउँपालिकालाई निशुल्क दिएको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धादिङ उपलब्ध गराएको निशुल्क औषधीहरुको सुची । जहाँ सोही औषधी १० औँ गुणा सस्तोमा खरिद गरिएको छ ।
५ हजार ट्याबलेट जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट सिद्धलेक गाउँपालिकाले बुझेको हस्तान्तरण फारममा देख्न सकिन्छ । जनस्वास्थ्यले सोही औषधी खरिद गर्दा प्रति ट्याबलेट ९४ पैसा मात्रै तिरेको छ । तर, गाउँपालिकाले भने ७ रुपैयाँ ५६ पैसा महँगोमा खरिद गरेको विलमा उल्लेख गरेको छ ।
गाउँपालिकाले ६ हजार ट्याबलेट खरिद गर्दा ४५ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ मुल्य महँगो तिरेको बिलमा देखाएको छ । स्रोतका अनुसार गाउँपालिले बीलमा रकम भुक्तानीको लागि औषधी उल्लेख गरेपनि स्वास्थ्य चौकीहरुमा भने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले नै उपलब्ध गराएको निशुल्क औषधी पठाइएको छ ।
‘किनेको त देखाइएको मात्रै हो । बिल अन्यत्रै बनाएर गाउँपालिकाबाट रकम भुक्तानी गरिसकेको छ,’ गाउँपालिकाका उच्च अधिकारीले भने,‘जनस्वास्थ्यले दिएको कयौँ औषधीहरुलाई गाउँपालिकाले किनेको भन्दै बिलमा उल्लेख गरिएको छ । बिलमा उल्लेख भएको औषधी आएकै छैन ।’
गाउँघरमा भाषामा ‘शिवाजल’ भनिने कोट्रिम नामको ४८० एमजीको १० हजार ट्याबलेटस् खरिद गरिएको बिलमा उल्लेख छ । उक्त औषधी प्रति ट्याबलेट् ४ रुपैयाँ २० पैसामा गाउँपालिकाले कुल ४२ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको उल्लेख छ । तर, सोही औषधी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले प्रति ट्याबलेट्स ६५ पैसामा खरिद गरेको देखिएको छ । यो औषधीमा समेत गाउँपालिकाका उच्च अधिकारीले ३५ हजार ५ सय रुपैयाँ महँगो तिरेको बिलमै देखाएका छन् ।
गाउँपालिकाले ६० हजार प्यारासिटामोल ट्याबलेट्स खरिद गर्दा ५३ हजार ४ सय रुपैयाँ तिरेको बिलमा उल्लेख छ ।
प्रति ट्याबलेट गाउँपालिकाले ८९ पैसामा खरिद गरेको देखाएको छ । तर, सोही प्यारासिटामोल जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले खरिद गर्दा भने २८ पैसामा मात्रै खरिद गरेको हस्तान्तरण फारममा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले ५३ हजार ४ सय रुपैयाँको औषधी किन्दा ३६ हजार ६ सय रुपैयाँ सिधै घोटाला गरेको देखिन्छ ।
१० एमजीको सिट्रिजिन नामक औषधी प्रति ट्याबलेट २ रुपैयाँ ८० पैसाका दरले २८ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ । जुन औषधी स्वास्थ्य कार्यालयले प्रति ट्याबलेट २९ पैसामा खरिद गरेको देखिन्छ । २८ हजार २ सय रुपैयाँको औषधीमा गाउँपालिकाले २५ हजार १ सय रुपैयाँ यही ट्याबलेटमा घोटाला गरेको छ । गाउँपालिकाले खरिद गरेको १० हजार ट्याबलेट सिट्रिजिन स्वास्थ्य कार्यालयको मल्य अनुसार २९ सय रुपैयाँमा आउने देखिन्छ । तर यो औषधीलाई गाउँपालिकाले २८ हजार खर्च गरेको छ । यो भनेको १० गुणा बढी महँगो हो ।
१० एमजी र २० एमजीको हाइसिन बुटाइल ब्रुमाइड नामक औषधीमा पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र सिद्धलेक गाउँपालिकाको फरक मुल्य छ । यी दुवै औषधीमा १५ हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ फरक परेको छ ।
औषधी खरिदका विचौलिया भरतमणी सिलवाल
एन्टासिड नामक औषधीमा पनि ४ हजार २ सय महँगोमा गाउँपालिकाले खरिद गरेको छ । जसलाई स्वास्थ्यकर्मीले नै प्रयोगमा ल्याउन अस्विकार गरेका छन् । यो औषधीको पत्ताबाट ट्याबलेट्स निकाल्दा धुलो आउने गरेको छ ।
गाउँपालिकाले खरिद गरेको भनेको ८२ प्रकारका औषधी मध्ये अधिकांश औषधी नेपाल सरकारले जनस्वास्थ्य कार्यालय मार्फत निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ती औषधीहरु अधिकांश १० गुणा भन्दा बढी महँगोमा खरिद गरेको बिलमै उल्लेख छ । त्यसो त जहाँबाट औषधी खरिद गरिएको छ त्यो बिलसमेत गाउँपालिकासँग छैन । बिलमा उल्लेखित सञ्जु श्री मेडिसिन सप्लायर्सका मालिक नवराज श्रेष्ठलाई दियोपोष्टले सम्पर्क गर्दा आफूले औषधी नदिएको बिल मात्रै प्रयोग भएको बताएका थिए । उनको अडियो रेकर्ड दियोपोस्टँग सुरक्षित छ ।
कुल १९ लाख ५३ हजार ८ सय ५३ रुपैयाँमो औषधी खरिदमा चरम अनियमितता भएको पाइएको छ । त्यसो त गाउँपालिकाले एक पटकमात्रै औषधी खरिद गरेको भने होइन । गत आर्थिक वर्षमा पनि सोही मुल्य बराबरको औषधी ३ पटक खरिद गरिसकेको छ । उक्त खरिद प्रकरणमा समेत व्यापक अनियमितता भएको गाउँपालिकाकै एक उच्च कर्मचारी बताउँछन् ।
बोनस औषधी गायब !
सामान्यतय औषधी विक्रेताहरुले ठूलो परिमाणको औषधी खरिदमा १० देखि १०० प्रतिशतसम्म बोनसको रुपमा औषधी नै दिने गरेका छन् । औषधी खरिदको बिल बनाउने सञ्जुश्री मेडिसिन सप्लायर्सले बिल मात्रै उपलब्ध गराएको भएतापनि औषधी खरिद गर्ने विचौलिया भरतमणी कोइरालाले क्युरेक्स नामक कम्पनीबाट केही औषधी ल्याएको पाइएको छ ।
क्युरेक्स जस्ता ठूला औषधी विक्रेताहरुले शत प्रतिशत बोनस समत दिने गरेका छन् । अर्थात साढे १९ लाखको औषधी खरिद गर्दा औषधी अनुसार ५० प्रतिशत बोनस पाउँछन् । ‘यदि गाउँपालिकाले साढे १९ लाख रुपैयाँको औषधी खरिद प्रक्रिया थालेको छ भने करिब ५ देखि ७ लाख रुपैयाँमा ती सबै औषधी आउँछन्,’ गाउँपालिकाकै ती उच्च अधिकारीले भने,‘बाँकी पैसा कमिशन र घुसमै जाने हो । औषधी व्यापारीले नै कमिशन दिने गरेको हामीले थाहा पाएका छौँ ।’
औषधीका विचौलिया र स्वास्थ्य प्रमुख सिलवालको नाता सम्बन्ध !
सिद्धलेक गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख रामप्रसाद सिलवाल र औषधी खरिदमा विचौलियाको भूमिकामा रहेका भरतमणी सिलवाल नाताले दाजु भाई पर्छन् । उनीहरु दुवै जना सिद्धलेक गाउँपालिकाकै हुन् ।
भरतमणी मार्फत नै राम प्रसाद सिलवाल, धनेश्वर पौडेल र अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवालले कमिशन लिएको स्रोत बताउँछ । औषधी खरिदमा प्रशासन शाखा प्रमुख हरि पाटा मगरले समेत मोटै रकम हात पारेको गाउँपालिकाका एक अधिकारीले बताए । मगरले आफ्नै छोरी इरिसा पाटा मगरलाई गाउँपालिकामा जागिर लगाएका छन् ।
औषधीको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदा स्वास्थ्य प्रमुखको सरुवा !
कुम्पुर स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख सिनियर अहेब अधिकृत मोहम्मद रकिम अन्सारीले गाउँपालिकाले हस्तान्तरण गरेको औषधीको परिमाण र गुणस्तरियताको विषमाय प्रश्न गरेका थिए । त्यति मात्रै होइन गाउँपालिकाकै उच्च अधिकारीले स्वास्थ्य चौकीमा हस्तान्तरण गरेको औषधीको लिखित परिमाण एउटा र रोहबरमा पोका खोल्दा औषधी नै नपुगेको पाइएको थियो ।
गाउँपालिकाले पठाएको नियोम्याइसिन नामक औषधी हस्तान्तरण फारममा २ सय ट्युब उल्लेख थियो । तर, स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिका सदस्य मोहन घलेसहितको रोहबरमा पोका खोल्दा २ वटा मात्रै ट्युब भेटिएको हो । कर्मचारी, वडाका प्रतिनिधि लगायतको रोहबरमा उनले माइन्युट नै उठाएका थिए । कुम्पुर स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी तुलबहादुर घलेलाई उचालेर कार्यालयको हाजिरी कपी नै गायब पारिएका पाइएको छ ।
सिद्धलेक गाउँपालिका अध्यक्ष सिलवाल विरुद्ध स्थानियबासी आन्दोलित : कार्यालय घेराबन्दी !
अन्य कर्मचारीलाई भने स्वास्थ्य प्रमुख सिलवालले महिनाको एक पटक पालिका कार्यालयमा आएर हाजिर गर्न उर्दी गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष सिलवाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनेश्वर पौडेलसहितको टोलीले नेकपाका सांसद भूमि त्रिपाठीलाई प्रयोगगरी अन्सारीको सरुवाको लागि स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुहारेको स्रोतले बतायो ।
अन्सारीले गाउँपालिकाले खरिद गरेर स्वास्थ्य चौकीहरुमा पुर्याइएको औषधीको परिमाण र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । सिलवालले अन्सारी विरुद्ध कार्यालय सहयोगीलाई नै परिचालन गरेका थिए । घले अनियमिततामा समेत मुछिएका थिए । वडाध्यक्ष टिका थपलिया र गाउँपािलका अध्यक्ष सिलवालको आडमा उनी सेवाग्राहीसँग झगडा गर्ने गरेको स्वास्थ्य चौकीमा आएका विरामीले बताए ।
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भन्छन्,–‘भेटेरै कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो’
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राम प्रसाद सिलवाल
औषधी खरिदमा भएको अनियमितताको विषयमा सिद्धलेक गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राम प्रसाद सिलवाललाई सम्पर्क गरेर कोटेशन माग गर्दा उनले दिन आनकानी गरे । ‘सबै कुरा भुक्तानी भइसक्यो । मसँग छैन । कतिपय कुरा लेखामा गइसकेको छ,’ उनले भने ।
सिलवालले औषधी किनेको यकिन स्थान समेत भन्न रुचाएनन् । ‘हामीलाई सञ्जश्रीबाट कम दररेटमा औषधी उपलब्ध भयो । उनीहरुले कहाँ किन्छन् हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन,’ सञ्जु श्रीको बिल मात्रै प्रयोग हुने र औषधी अन्तैबाट ल्याउँदा पनि चल्ने हो भन्ने दियोपाष्टको प्रश्नमा उनले भने,‘त्यस्तो होइन । हामीले सञ्जु श्रीबाटै औषधी ल्याएका हौँ ।’
तर, सञ्जु श्रीका आधिकारिक व्यक्ति बताउने नवराज श्रेष्ठले भने आफूले बिल मात्रै दिएको बताएका छन् । सप्लायर्सले नै ‘मैले औषधी दिएको छैन बिल मात्रै दिएको हुँ’ भनिरहँदा समेत सिलवाल भने सोही सप्लायर्सबाट औषधी ल्याएको झूट बोल्न किन बाध्य छन् त्यो रहस्यमयी रहेको छ ।
आफूहरुले जनस्वास्थ्यको औषधीले मात्रै नपुगेर अन्य स्थानको औषधी खरिद गरेको उनको दाबी छ ।
गाउँपालिकाले खरिद गरेको औषधीको बिलमा ब्याच नम्बर र एक्सपाइरी डेट समेत उल्लेख छैन । यद्धपी जनस्वास्थ्य कार्यालयले दिएको औषधीमा भने एक्साइरी डेट र ब्याच नम्बर उल्लेख छ । यस विषयमा सिलवाललाई प्रश्न गर्दा सप्लायर्सले पठाएको कोटेशनमै भएको बताए ।
त्यो कोटेशन हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ भन्ने दियोपोस्टको प्रश्नमा उनले भने,‘हजुर.. अ… पहिले पनि तपाईंहरुले औषधीको विषयमा लेख्नु भएको रहेछ । म सित बसेर कुरा गर्नु भएको भए हुन्थ्यो ।’
औषधीको मुल्यको विषयमा पनि सिलवाललाई दियोपोष्टले प्रश्न गरेको थियो ।
तपाईंहरुले एमोक्सीसिलिन नामक औषधी प्रतिट्याबलेट ६ रुपैयाँ ८० पैसामा किन्नु भएको रहेछ । त्यही औषधी स्वास्थ्य कार्यालयले २ रुपैयाँ ७९ पैसामा खरिद गरेको पाइयो । यसरी महँगोमा खरिद गरेको देखाएर त्यो रकम घुस खानु भयो की कमिशन ? यसरी जनताको करमा रजाइँ गर्न पाइन्छ ? भन्ने दियोपोस्टको प्रश्नमा उनले भने,‘रजाइँ गरेको होइन । उहाँहरुको कोटेशनमा दरभाउमा खरिद गरेको हो । त्यसमा १५/१६ प्रतिशत छुट गरेको हो । त्यो औषधी कसरी आयो होला र ?’
औषधीको बोनस कहाँ लैजानु भयो भन्ने प्रश्नमा उनको स्वर लडबडिएको उत्तर थियो,‘बोनस् आ… आएको छैन । त्यो त …. हामीले नल्याको कुरा कसरी भन्ने हो र ? अलिकति तपाईंहरु र हामी बसेर छलफल गर्दा राम्रै हुन्छ सर । बसेर कुराकानी गरौँ ।’
औषधी खरिदका अर्का अभियुक्तले फोन उठाएनन
त्यसैगरी प्रतिक्रियाका लागि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा औषधी खरिद काण्डका अभियुक्त धनेश्वर पौडेलको मोबाइल नम्बर ९८४१४०८४४५ मा पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनले फोन उठाएनन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष सिलवालले दियोपास्टले एकतर्फी रुपमा समाचार प्रकशन गरेको र आफ्नो भनाईलाई स्थान नदिएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी समेत दिएका थिए ।
तर, यसअघि प्रकाशित अधिकांश समाचारमा उनको भनाई सोही समाचार पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
औषधी खरिदको विषयमा सिलवालको नम्बर ९८५१२००५७८ मा पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि फोन लाग्न सकेन ।
सिद्धलेक गाउँपालिका ‘फलोअप’ : अध्यक्ष सिलवाल र पौडेलको मिलेमतोमा ३ करोडको ठेक्का गोलमाल !
सिद्धलेक गाउँपालिका बन्यो अध्यक्षको आफन्त ‘भर्तिकेन्द्र’ : सम्धी पिए र ज्वाइँलाई जागिर !
सिद्धलेक गाउँपालिका अध्यक्षको ‘कतुर्त लुकाउन मिडियामा लगानी’ : को हुन् पैसा लिने पत्रकार !
सोमबार, साउन १९, २०७७ | १७:०८:५२